शृंखला लागि चेल्सी PTO तैयार एडेप्टर 626, 628, 630 र 645
चेल्सी PTO तैयार एडेप्टर2019-09-11T10:35:28-04:00
चेल्सी PTO तैयार एडेप्टर
चेल्सी तैयार एडेप्टर, जस्तै 626, 628, 630 र 645 एडेप्टर को परिवार जब तपाईं परिक्रमा मा परिवर्तन आवश्यक वा अवरोध खाली गर्न प्रयास गर्दै आफ्नो चयन र स्थापना सरल डिजाइन. यी एडेप्टर जस्तै इनपुट गियर प्रयोग 442 – 489 Series P.T.O.s and are available as kits. सबै चेल्सी शक्ति बन्द लिन एडेप्टर विश्वव्यापी जहाज तयार स्टक छन्.
चेल्सी 626 श्रृंखला PTO
Parker / चेल्सी 626 श्रृंखला एडेप्टर तपाईंले गरेको गर्न आवश्यक कठिन जब गर्न डिजाइन. The Chelsea tapered bearings design provide maximum load bearing capabilities and eliminates your worries about torque capacity decreasing when using an adapter with your P.T.O. तपाईं एउटा हस्तक्षेप समस्या समाधान वा P.T.O परिवर्तन गर्न आवश्यक कि. उत्पादन सापट परिक्रमा, हामी तपाईंलाई के आवश्यक छ छ. Chelsea offers the widest selection of adapters in the industry, यस्तो Hino रूपमा आयात ट्रक फिट गर्न एडेप्टर सहित, ईसुजु, मित्सुबिशी र निसान.
चेल्सी 628 श्रृंखला PTO
Parker / चेल्सी 628 श्रृंखला तैयार एडप्टर तपाईंले गरेको गर्न आवश्यक कठिन जब गर्न डिजाइन गरिएको छ. को चेल्सी बेयरिंग डिजाइन अधिकतम लोड असर क्षमताहरु प्रदान tapered र आफ्नो PTO एउटा एडप्टर प्रयोग गर्दा घट्दै टोक क्षमता बारे आफ्नो चिन्ता समाप्त. तपाईं एउटा हस्तक्षेप समस्या समाधान वा PTO उत्पादन सापट परिक्रमा परिवर्तन गर्न आवश्यक कि, हामी तपाईंलाई के आवश्यक छ छ. चेल्सी उद्योग मा तैयार एडेप्टर को फराकिलोकालागि चयन प्रदान गर्दछ, यस्तो Hino रूपमा आयात ट्रक फिट गर्न एडेप्टर सहित, ईसुजु, मित्सुबिशी र निसान.
6-बोल्ट P.T.. एक 8-बोल्ट ट्रान्समिसन खोल्दै गर्न
को P.T.O उत्प्रेरित गर्छ. सीधा प्रसारण देखि बाहिर
को जस्तै इनपुट गियर प्रयोग 442 र 489 श्रृंखला
दुई वर्ष वारेन्टी
चेल्सी 630 श्रृंखला PTO
Parker / चेल्सी 630 श्रृंखला एडेप्टर तपाईंले गरेको गर्न आवश्यक कठिन जब गर्न डिजाइन. The Chelsea tapered bearings design provide maximum load क्षमताहरु असर र आफ्नो PTO एउटा एडप्टर प्रयोग गर्दा घट्दै टोक क्षमता बारे आफ्नो चिन्ता समाप्त. तपाईं एउटा हस्तक्षेप समस्या समाधान वा PTO उत्पादन सापट परिक्रमा परिवर्तन गर्न आवश्यक कि, हामी तपाईंलाई के आवश्यक छ छ. Chelsea offers the widest selection of gear adapters in the industry, यस्तो Hino रूपमा आयात ट्रक फिट गर्न एडेप्टर सहित, ईसुजु, मित्सुबिशी र निसान.
6-बोल्ट P.T..6बोल्ट ट्रान्समिसन खोल्दै गर्न
को P.T.O उत्प्रेरित गर्छ. तल एक 30 ° कोण मा, हस्तक्षेप समस्या हटाउन मदत
Parker / चेल्सी 645 श्रृंखला एडेप्टर तपाईंले गरेको गर्न आवश्यक कठिन जब गर्न डिजाइन. को चेल्सी बेयरिंग डिजाइन अधिकतम लोड असर क्षमताहरु प्रदान tapered र आफ्नो PTO एउटा एडप्टर प्रयोग गर्दा घट्दै टोक क्षमता बारे आफ्नो चिन्ता समाप्त. तपाईं एउटा हस्तक्षेप समस्या समाधान वा PTO उत्पादन सापट परिक्रमा परिवर्तन गर्न आवश्यक कि, हामी तपाईंलाई के आवश्यक छ छ. चेल्सी उद्योग मा तैयार एडेप्टर को फराकिलोकालागि चयन प्रदान गर्दछ, यस्तो Hino रूपमा आयात ट्रक फिट गर्न एडेप्टर सहित, ईसुजु, मित्सुबिशी र निसान.
को P.T.O उत्प्रेरित गर्छ. तल एक 45 ° कोण मा, हस्तक्षेप समस्या हटाउन मदत